Wararkii ugu dambeeyey ee Cayaaraha - BBC News Somali
Wararkii ugu dambeeyey ee Cayaaraha
18 Nofembar 2016
Image caption Hector Bellerin
Arsenal oo war aanay ku farxin uu soo yeeray
Daacafa garabka midig uga ciyaara kooxda Arsenal Hector Bellerin ayaa la xaqiijiyey in uu garoomadda ka maqnaan doonno afar asbuuc dhaawac anqowga ah.
21 jirka reer Spain ayaa ku dhaawacay ciyaartii oodwadaaga ahayd ee 6-dii November ee kooxdiisu la yeelatay kooxda Tootenham.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in Bellerin uu ku dhaawacmay ka dib "jalaafo xoog badan oo uu kula kacay ciyaaryahan Danny Rose-ka Tottenham.
Bellerin, ayaa ciyaaray dhammaan ciyaarihii 11-ka ahaa ee Arsenal waxaana la filayaa inuu seego 8 kulan oo muhiim u ah kooxdiisa ciyaarayso oo uu ku jiro kulanka Champions League-ga ka mid ah ee kooxda Paris St-Germain ay ku imaannayso Emirates Stadium.
Arsenal oo kaalinta 4-aad hadda kaga jirta kala horreynta kooxaha Premier League-ga, waxay sabtida marti u tahay kooxda Manchester United.
Messi oo rajo laga muujiyey sii joogista kooxda Barcelona:
Lahaanshaha sawirka Huw Evans picture agency
Image caption Messi afar mar ayuu noqday laacibka aduunka
Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa sheegay inay ka dhaadhacsan tahay Lionel Messi in uu sii joogo kooxda Barecelona oo ku soo biiray sanadkii 2004-tii.
Ciyaarahanka laacibka aduunka ku guulaystay afarta mar oo heshiiska uu kula joogo uu dhacayo sanadka 2018-ka, ilaa iyo hadda ma aqbalin in uu heshiis cusub saxiixo.
Bartomeu ayaa sheegay in Barcelona ay rumaystay in hadda la joogo waqtigii heshiiska la samayn lahaa, iyadoo lagu xushmanayo in ciyaaryahankaasi uu sanadihii ugu dambeeyey kooxda u horseeday guulaha ay gaartay.
Dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa heshiis cusub oo qiimihiisu ku kacayo in ka badan 250 milyan oo doolar la gashay shirkadda Internet-ka wax ku iibisa ee Rakuten ee laga leeyahay wadanka Jaban, iyadoo kala wareegaysa xayaysiiska funaannada Barcelona oo hadda lagu xayaysiiyo shirkadda Qatar Airways.
Tottenham oo dhaawacyo hor leh soo wajaheen.
Image caption Ciyaartoyda Tottenham
Tottenham oo ayaa waxaa ka maqnaan doonna ciyaaryahanno muhiim ah kulanka ood-wadaaga ah ee West Ham ay la leeddahay sabtida,
Tababaraha Tottenham Mauricio Pochettino ayaa xaqiijiyey in daafacyadda Toby Alderweireld & Ben Davies, & ciyaaryahanka khadka dhexe Erik Lamela ay ciyaaartaas uga maqan yihiin dhaawacyo.
Dele Alli, oo isagu seegay ciyaarihii saaxiibtinimmo ee xulka Ingiriisku ciyaaray iyo ciyaartii Arsenal ayaa sidoo kale u maqnaan donna dhaawac jilibka ah.
Daynta lagu leeyahay kooxda Manchester United oo cirka isku shareertay
Lacagta daynta ah ee lagu leeyahay kooxda Manchester United ayaa kor u kacday 18% iyadoo gaartay in ka badan 421 milyan oo doolar.
Hadalkan waxaa xaqiijiyey gudoomiye kuxigeenka fulinta Manchester United Ed Woodward, isagoo taasi oo sababeeyey in ay hoos u dhacday dhakhliga kooxda oo ay ugu wacan tahay ka maqnaanshaha ciyaaraha horyaaladda Yurub ama Champions League-ga.
Laakiin wuxuu muujiyey in sababahaas ay qayb ka tahay ka bixitaankii UK ee Midowga Yurub oo lacagta Ingiriisku hoos dhac ku yimid marka laga badalo doolar.
Manchester United oo malaayiin doolar ku waynaysa haddii aanay ka qayb galin Champions League-ga
Image caption Mata & Harera
Manchester United waxay lumin doontaa aduun lacageed oo gaaraya 24 milyan oo doolar heshiiska dhaqaale oo ay kula jirto shirkadda Adidas ee ay ku xayaysiiso funanaadeeda ay ku ciyaarto.
Shirkadda Jarmalka ah ee Adidas ayaa sheegtay in haddii Manchester United aanay u soo bixin ka qayb galin ciyaaraha koobka horyaaladda Yurub ee sanadka soo socda.
Adidas ayaa Man United kula jirta heshiis 10 dano ah oo ku kacaya 932 milyan oo doolar, laakiin haddii aanay ka qayb galin champions League-ga halkii sanadkii ay ka qaadan lahaayeen 87 milyan oo doolar, waxaa laga dhimi doonnaa 26 milyan.